Free Premium Account Cookies အသုံးပြုနည်း ~ ITmanHOME
02:36 Download လုပ်နည်းများ, နည်းပညာ No comments
Free Premium Account Cookies အသုံးပြုနည်း
naing naing: အကိုဝင်း ကျွန်တော်နားမလည်တာက အကိုပေးထားတဲ့ Premium Account Cookies ကိုအသုံးပြုနည်းမသိဘူးဗျ...ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးတော့ ဘယ်လိုပြန်အသုံးပြုရပါသလဲ 7b4c95bad4d8305ff0f472bc7ee89a38 ဒီလိုစာတန်းလေး တစ်ခုကို ဘယ်လိုသုံးရတာလဲ ပြောပြပေးပါလား...သုံးကြည့်မလို့ပါ....
ဒီ Premium Account Cookies အသုံးပြုနည်းလေး ရေးမလို့ ရေးမလို့ နဲ့ မရေးဖြစ်ဘူးဗျာ ... ခုတော့ မေးနေတာနဲ့ ကြုံလို့ မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများလည်း ဗဟုသုတ ရအောင် ကိုယ်သိထားတာလေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...:)
Firefox Browser ကိုသုံးပြီး ရှင်းပြပေးပါ့မယ် ....
Firefox Browser > New Tab ကိုဖွင့်ပါ
Menu Bar က Bookmarks ကိုနှိပ်ပြီး Bookmarks this page ကိုနှိပ်ပါ....(Crtl+D ကို နှိပ်လည်းရပါတယ်)
ပေါ်လာတဲ့ Box လေးမှာ ရေးချင်တဲ့ နာမည် (All-in-One Account) တခုခု ရေးပြီး Done ကိုနှိပ်ပါ..။
Bookmarks ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ... စောစောက Save ထားတဲ့ နာမည် (All-in-One Account)
Bookmark ပေါ်မှာ Right Click > Properties ကိုနှိပ်ပါ... ပြီးရင် ဒီ Notepad ဖိုင်လ် လေးကို ဒေါင်းယူပါ .. အဲဒီ Notepad ဖိုင်လ် ထဲက စာတွေ အားလုံးကို Copy ကူးပါ....
Location : ဘေးက Box မှာ about:blank ဆိုတာလေးကိုဖျက်ပြီး Copy ကူးထားတဲ့ Notepad ဖိုင်လ် ထဲစာတွေ အားလုံး ထည့်ပေးပြီး Save ကိုနှိပ်ပေးပါ.....
Premium Account Cookies ကိုတော့ ရှာတတ်မယ် ထင်ပါတယ်နော် ... (Premium Account တွေ လိုချင်ရင်တော့ ဒီ Blog လေးရဲ့ ညာဘက် ဆိုက်ဒ်ဘားမှာ .....
Button လေးနဲ့ Link ချိတ်ပေးထားပါတယ် နေ့စဉ် Update ဖြစ်တဲ့ ဆိုက်ဒ်လေးပါ)
အဲ့ဒီ Premium Account Button ကိုနှိပ်ပါ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Premium Account ကို ရွေးပြီး Premium Cookie ကုဒ်တွေ ဥပမာ ဒီလို ကုဒ်တွေပါ....
အခုအပေါ်မှာ မေးထားတဲ့ Naing Naing ရဲ့ မေးခွန်းထဲက ဒီကုဒ် 7b4c95bad4d8305ff0f472bc7ee89a38 ဆိုတာ Premium Account Cookies ပါပဲ... အဲဒီ Cookies လေးကို Copy ကူးထားပါ....
Premium Account နဲ့ မိမိ ဒါင်းယူမဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Hosting ဆိုက်ဒ် ကို သွားပါ..... ( Filesonic, Wupload, Hotfile, Uploaded.to, Turbobit.net, Filesmonster, Alldebrid, Filefactory, Crocko, Oron, Rapidshare, Fileserve, Uploading ...)
ရောက်ပြီဆိုရင် Bookmarks ကို နှိပ်ပါ... စောစောက မိမိရေးမှတ်ထားတဲ့ (All-in-One Account) Bookmark ကို ဖွင့်ပါ ... ပေါ်လာတဲ့ Box ထဲမှာ ကူးထားတဲ့ Cookies လေးတွေကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ....
သူ့ဘာသာသူ Login ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်....... အဲ့ဒါ ကျနော်သိထားတဲ့ Cookies အသုံးပြုနည်းပါပဲ... အားလုံး အဆင်ပြေ အောင်မြင်ကြပါစေဗျားးးး
နားမလည်လို့ အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင် ဒီ Video လေးကို ကြည့်လိုက်ပါ....။